कुन स्थानीय तहमा को-को बने उम्मेदवार ?::KhojOnline.com
कुन स्थानीय तहमा को-को बने उम्मेदवार ?
१९ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत पहिलो चरणको चुनावका लागि आज ३४ जिल्लामा उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । विहान १० बजेबाट सुरु भएको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया साँझ ५ बजेसम्म चल्नेछ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का कुन ३४ जिल्लाहरुमा हुँदैछ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर समेत गरी १३ वटा जिल्ला छन् ।
नोटः यो प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा तयार पारिएको उम्मेदवारहरुको सूचीमा छ । यदि तपाईसँग पनि स्थानीय चुनावसम्वन्धी सूचना छन् भने अनलाइनखबरको डेक्समा ०१ ४७८६४८९ फोन वा [email protected] मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
२०७४ वैशाख १९ गते १५:५० मा प्रकाशित
यदि तपाईले बालबालिकाले सार्वजनिक स्थानमा खुलेआम उठेर दिसा गरिरहेको देख्नु भयो भने के सोच्नु हुन्छ ? तर, चीनमा भने यो सामान्य कुरा हो । बालबालिकालाई हिडडुल गर्न कुनै अफ्ठ्यारो नहोस् भनेर अधिकांश मानिस एक किसिमको परम्परागत लुगा लगाइदिन्छन्, जसलाई चिनियाँ भाषामा ‘कई डांग कू’ भनिन्छ । यो...